isantya esiphezulu lokungenisa i-iron kunye neenkqubo zobhedu
Ikhaya / izicelo / Ukukhangela ibhola / I-induction yensimbi yentsimbi kunye nenkqubo yamalungu obhedu
iindidi: izicelo, Ukukhangela ibhola tags: ubhedu obuninzi be-soldering, insimbi ye-soldering insimbi ephezulu, ukutyunjwa kokungena, ukutyunjwa kwebhondi, Inkqubo yokuthengisa yokuthengisa, i-soldering, ubhedu, Isinyithi yentsimbi, intsimbi ethengiswayo kunye nobhedu
Icandelo: Ukwenziwa kweMveliso yokuThengisa
izixhobo: I-DW-UHF-6KW i-heter yangaphakathi ephathwayo yokuthengisa umbane
Izixhobo zovavanyo loku-1: Umhluzi webrass
Izixhobo zovavanyo loku-2: Intsimbi emnyama
Ukushisa: 800 oF (426 ° C)
ixesha: I-3-4 sec.
Amalungu asetyenziswa kwiinkqubo zolawulo lwenqanaba leoli.
Amanyathelo enkqubo yovavanyo 1:
Okokuqala, umthengisi owenziwe kwangaphambili ubekwa phantsi komlomo wento yokusebenzela. Ke, cap yongezwa. Umbane-ubekwe kwimizuzwana emi-3. Inkqubo yokuthengisa iygqityiwe.
Amanyathelo enkqubo yovavanyo 2:
Kwakhona, umthengisi wangaphambi kokuba ubekwe ubekwe ejikeleze imilebe ephezulu yomsebenzi. Ucingo oluza kuthengiswa longezwa kwindawo yokusebenza. Ixesha lesibonelelo sombane lisetelwe kwimizuzwana emi-4. Inkqubo yokungenisa i -eringering igqitywa ngaphakathi ngexesha elimisiweyo. Umthengisi ogqithisileyo ucocekile.